Nipple Discharge – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ (သို့) နို့ခြိုတိုကျကြှေးနစေဉျမှာတော့.. နို့ဦးရညျ၊ နို့ရညျမြား ထှကျလရှေိ့ပါတယျ…သို့သျော ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျ(သို့) နို့တိုကျမိခငျ မဟုတျပဲ နို့သီးခေါငျးမှ ပုံမှနျမဟုတျသော အရညျမြား ထှကျလာပါက စိုးရိမျစရာထှကျနိုငျသလဲ တဈခုပါ..ဒီလိုအခါမှာ စဈဆေးကုသမှုတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ…
ဒါဆို အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ နို့သီးခေါငျးကနေ ဘယျလို အရညျမြား ?..
milky discharge (နို့ရညျ)
နို့ရညျထှကျသကဲ့သို့ ကိုယျဝနျနှောငျးပိုငျးကာလနဲ့ မီးဖှားပွီးမှာ ပရိုလကျတငျ လို့ချေါတဲ့ နို့ရညျထှကျမှုကို အားပေးသောဓာတျမွငျ့တကျလာပါတယျ ဒီအခါမှာ တခွား ပုံမှနျမဟုတျသော ရောဂါမြား(ဥပမာ- သားမွတျကငျဆာ၊စပဈြခိုငျသန်ဓသေား) တှမှောလညျး အဖွူရောငျ အရညျမြား ထှကျတတျပါတယျ..
စေးကပျပွီး အရောငျမြိုးစုံသော အရညျမြား (multicoloured and sticky discharges)
အမြိုးသမီးတဈယောကျအကွောငျးရငျဆောငျ(သို့) နို့တိုကျမိခငျမဟုတျပဲ သားမွတျကွီးထှား လာတယျ.. ယောငျရမျးလာတတျတယျ.. အကွောငျးရငျးမှာ သားမွတျထဲမှာ ရှိသော ပွှနျမြား ပိတျဆို့တာကွောငျ့ပါ.. ဒီအခါမှာ နို့သီးခေါငျးမှ ပုံမှနျမဟုတျသော အရညျမြား ထှကျတတျပါတယျ.. မြားသောအားဖွငျ့ အစိမျးရောငျရှိသော အရညျမြား ဖွဈပါတယျ..ဒီလိုမြိုးဖွဈပါက သားမွတျကငျဆာထိ ဖွဈပှားနိုငျတာမို့ သတိထားစရာပါ…
မီးဖှားပွီးနောကျပိုငျး သားမွတျယောငျခွငျး၊ သားမွတျတှငျး အကြိတျတညျခွငျးတှမှော နို့သီးခေါငျးမှ ပွညျမြား ထှကျတတျပါတယျ.. လိုအပျသော စဈဆေးမှုတှေ လုပျရပါမယျ.. အကယျ၍မြား.. မိမိမှာ ကငျဆာ ဖွဈပှားနိုငျသော အကြိတျရှိနပေါက ခှဲစိပျကုသမှုမြားထိ ပွလုပျရပါမယျ..
သှေး(သို့)အနံ့နံသော အရညျမြား(bloody discharges၊serous discharges )
မြားသောအားဖွငျ့ … သားမွတျအတှငျးရှိ နိျု့လမျးကွောငျးပွှနျထဲတှငျ ကငျဆာအဆငျ့ မဟုတျသေးသော အဖုအကြိတျမြား ဖွဈတဲ့အခါမှာ ဒီလို အရညျမြားထှကျတတျပါတယျ..ဒါ့ပွငျ သားမွတျတှငျး ကငျဆာမဟုတျသော အရညျအိတျတညျခွငျးမြား၊ သားမွတျကငျဆာ အရှိတာတှမှောလဲ ထှကျနိုငျပါတယျ.. ဒီလို သှေးကဲ့သို့သော အရညျမြားထှကျပါက.. စဈဆေးကုသမှုမြား အမွနျဆုံး ပွုလုပျရပါမယျ.. ခှဲစိတျကုသမှု မဖွဈမနေ ခံယူရမညျထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ..
ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ သားမွတျကငျဆာ ဖွဈပှားမှုကို လြော့ခရြနျ..
မိမိဘာသာ သားမွတျတှငျး အလုံးအကြိတျမြား ရှိမရှိ စမျးသပျကွညျ့ခွငျး…
သငျ့တငျ့မြှတသော အစားအသောကျ စားခွငျး
အိပျစကျခြိနျ ပုံမှနျရှိခွငျး ကဲ့သို့သော အလအေ့ကငျြ့မြား ထားသငျ့ပါတယျ..
ကနျြးမာ လှပသော အမြိုးသမီးဘဝ ကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုပွုလကျြ
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ဟာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​နေစဉ်​ (သို့) နို့ချိုတိုက်​​ကျွေး​နေစဉ်​မှာ​တော့.. နို့ဦးရည်​၊ နို့ရည်​များ ထွက်​​လေ့ရှိပါတယ်​...သို့​သော်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​(သို့) နို့တိုက်​မိခင်​ မဟုတ်​ပဲ နို့သီး​ခေါင်းမှ ပုံမှန်​မဟုတ်​​သော အရည်​များ ထွက်​လာပါက စိုးရိမ်​စရာထွက်​နိုင်​သလဲ တစ်​ခုပါ..ဒီလိုအခါမှာ စစ်​​ဆေးကုသမှု​တွေ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​...
ဒါဆို အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ နို့သီး​ခေါင်းက​နေ ဘယ်​လို အရည်​များ ?..
milky discharge (နို့ရည်​)
နို့ရည်​ထွက်​သကဲ့သို့ ကိုယ်​ဝန်​​နှောင်းပိုင်းကာလနဲ့ မီးဖွားပြီးမှာ ပရိုလက်​တင်​ လို့​ခေါ်တဲ့ နို့ရည်​ထွက်​မှုကို အား​ပေး​သောဓာတ်​မြင့်​တက်​လာပါတယ်​ ဒီအခါမှာ တခြား ပုံမှန်​မဟုတ်​​သော ​ရောဂါများ(ဥပမာ- သားမြတ်​ကင်​ဆာ၊စပျစ်​ခိုင်​သ​န္ဓေသား) ​တွေမှာလည်း အဖြူ​ရောင်​ အရည်​များ ထွက်​တတ်​ပါတယ်​..
စေးကပ်​ပြီး အ​ရောင်​မျိုးစုံ​သော အရည်​များ (multicoloured and sticky discharges)
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်အ​ကြောင်းရင်​​ဆောင်(သို့) နို့တိုက်​မိခင်​မဟုတ်​ပဲ သားမြတ်​ကြီးထွား လာတယ်​.. ​ယောင်​ရမ်းလာတတ်​တယ်​.. အ​ကြောင်းရင်းမှာ သားမြတ်​ထဲမှာ ရှိ​​သော ပြွန်​များ ပိတ်​ဆို့တာ​ကြောင့်​ပါ.. ဒီအခါမှာ နို့သီး​ခေါင်းမှ ပုံမှန်​မဟုတ်​​သော အရည်​များ ထွက်​တတ်​ပါတယ်​.. များ​သောအားဖြင့်​ အစိမ်း​ရောင်​ရှိ​သော အရည်​များ ဖြစ်​ပါတယ်​..ဒီလိုမျိုးဖြစ်​ပါက သားမြတ်​ကင်​ဆာထိ ဖြစ်​ပွားနိုင်​တာမို့ သတိထားစရာပါ...
မီးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်း သားမြတ်​​ယောင်​ခြင်း၊ သားမြတ်​တွင်း အကျိတ်​တည်​ခြင်း​တွေမှာ နို့သီး​ခေါင်းမှ ပြည်​များ ထွက်​တတ်​ပါတယ်​.. လိုအပ်​​သော စစ်​​ဆေးမှု​တွေ လုပ်​ရပါမယ်​.. အကယ်​၍များ.. မိမိမှာ ကင်​ဆာ ဖြစ်​ပွားနိုင်​​သော အကျိတ်​ရှိ​နေပါက ခွဲစိပ်​ကုသမှုများထိ ပြလုပ်​ရပါမယ်​..
​သွေး(သို့)အနံ့နံ​သော အရည်​များ(bloody discharges၊serous discharges )
များ​သောအားဖြင့်​ ... သားမြတ်​အတွင်းရှိ နို့်လမ်း​ကြောင်းပြွန်​ထဲတွင်​ ကင်​ဆာအဆင့်​ မဟုတ်​​သေး​သော အဖုအကျိတ်​များ ဖြစ်​တဲ့အခါမှာ ဒီလို အရည်​များ​ထွက်​တတ်​ပါတယ်​..ဒါ့ပြင်​ သားမြတ်​တွင်း ကင်ဆာမဟုတ်​​​သော အရည်​အိတ်​တည်​ခြင်းများ၊ သားမြတ်​ကင်​ဆာ အရှိတာ​တွေမှာလဲ ထွက်​နိုင်​ပါတယ်​.. ဒီလို ​သွေးကဲ့သို့​သော အရည်​များထွက်ပါက.. ​စစ်​​ဆေးကုသမှုများ အမြန်​ဆုံး ပြုလုပ်​ရပါမယ်​.. ခွဲစိတ်​ကုသမှု မဖြစ်​မ​နေ ခံယူရမည်​ထိ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​..
ဒါ​ကြောင့်​ အမျိုးသမီး​တွေ သားမြတ်​ကင်​ဆာ ဖြစ်​ပွားမှုကို ​လျော့ချရန်​..
မိမိဘာသာ သားမြတ်​တွင်း အလုံးအကျိတ်​များ ရှိမရှိ စမ်းသပ်​ကြည့်​ခြင်း...
သင့်​တင့််မျှတ​သော အစားအ​သောက်​ စားခြင်း
​အိပ်​စက်​ချိန်​ ပုံမှန်​ရှိခြင်း ကဲ့သို့​သော အ​လေ့အကျင့်​များ ထားသင့်​ပါတယ်​..
ကျန်းမာ လှပ​သော အမျိုးသမီးဘဝ ကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆုပြုလျက်